Gudoonka Bari oo dhigax dhigay laami cusub oo lagu tilmaamay mid muhiim u ah Boosaaso (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 23, 2013 3:17 b 0
Boosaaso, December 23, 2013 – Maamulka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso ayaa manata dhagax dhigay jid cusub oo laami ah oo tegi doona dekeda Boosaaso, wadada ayaa loogu magacdaray Huruuse
Jidka cusub ayaa dherer ahaan le?eg ?1 Km iyo 250 mitir. Dhismaha laamiga cusub waxaa uu qayb yahay mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland ee JPLG.
Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Galan oo ka hadlay furitaanka dhismaha jidka cusub ayaa sheegay in magaalada Boosaaso ay aad ugu baahnayd in ay hesho marino badan oo la isticmaalo, isagoo carabka ku dhuftay in lagu guulaystay dhismaha jidad door ah xiliyadii u dambeeyey.
?Maanta Boosaaso waxay leedahay in ka badan 10 wado oo waa wayn oo qaybtood dhisme ku socdo qaybna la dhameeyey, jidadka wixii dhib u keenaya waa in laga ilaaliyaa waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada iyo shacabka Boosaaso inay arintaas talaabo u qaadan.? Ayuu yiri Gudoomiye Gallan.
Duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan ayaa isna furitaanka ka sheegay in jidkan uu muhiim u noqon doono isu socodka degmada Boosaaso weliba ganacsiga, wuxuu carabka ku dhuftay in wadooyin kale oo muhiim ah laga hir-gelin doono magaalada xeebta ah sanadka cusub
Bulshada magaalada Boosaaso ayaa si wayn u soo dhoweeyey dhismaha jidka cusub ee magaalada, rayidku waxay ugu baaqeen ganacsatada makhaayadaha ee jidku hor mari doono in ay ka ilaaliyaan nadaafad xumada iyo biyaha oo aan u wanaagsanayn jiritaanka jidka
Dhegeyso: – Cabdiraxmaan Axmed oo daljir ka tirsan ayaa diyaariyey war-bixin ka hadlaysa jidka